Freshmarketer: ဒီကူးပြောင်းမှု Optimization Suite ကိုအတူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စမ်းသပ်, နှင့်ကိုယ်ပိုင်: | Martech Zone
စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 3, 2020 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 3, 2020 Douglas Karr
မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုအမှန်တကယ်မောင်းနှင်ခြင်းမရှိသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပါဝင်သည့်အရာများထဲသို့ထည့်သွင်းထားသောအလုပ်ပမာဏမှာစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများက ၀ ယ်ယူသူတို့က site တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်၊ ပေါင်းစည်းရန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုအခိုင်အမာတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုပလက်ဖောင်း၏အသုံးချမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အချိန်နှင့်ခွန်အားကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်မဟုတ်ပါ။
optimization ကုမ္ပဏီများသည်မကြာခဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာခြင်းကိုသဘောမပေါက်သောအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုထားသည်။ ၎င်းမှမရှိလျှင်ကုမ္ပဏီသည်အောင်မြင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့နောက်စီမံကိန်းသည်အလုံးစုံအစိတ်အပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကောင်းမြင်မှုကိုကန့်ကွက်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တာ ၀ န်ခံမှုရှိလိမ့်မည်။ လူတိုင်းကိုငြင်းပယ်လို့မရပါဘူး
Freshmarker ၏ကူးပြောင်းခြင်း Optimization Suite အင်္ဂါရပ်များ
ကိရိယာများအကြားအခက်အခဲမရှိသောသင်၏အချိန်နှင့်ငွေကိုချွေတာပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်သင်လိုအပ်သမျှသည်အားလုံးထဲတွင်ရှိသည် လတ်ဆတ်တဲ့ Market.
နေပြည်တော် - သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ visitors ည့်သည်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမြင်ယောင်ပါ။ အချိန်နှင့်တပြေးညီနှိပ်ခြင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ ကျိုးပဲ့နေသော link များ၊ ရုပ်ပုံများကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေခြင်းနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းတို့ကိုရှာဖွေ။ ပြုပြင်ပါ။
itor ည့်သည်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့် - သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက် visitors ည့်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုဖမ်းယူပြီး၎င်းတို့မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်၊ မည်သည့်ကဏ္widelyများကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်နှင့်လျစ်လျူရှုထားသည့်ကဏ္identifyများကိုဖော်ပြပါ။
ခွဲစိတ်စမ်းသပ်ခြင်း - ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်ရှုပ်ထွေးသောဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန် URL အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုများနှင့်သင့်ဝင်ငွေတိုးလာစေနိုင်သည်။
A / B စမ်းသပ်ခြင်း - ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ယူဆချက်များကိုအတည်ပြုပါ။ WYSIWYG အယ်ဒီတာနှင့်အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဝင်ငွေပန်းတိုင်များကိုတိုင်းတာပါ။
personalization - ၀ က်ဘ်ဆိုက် visitors ည့်သည်များအတွက်အတွေ့အကြုံများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးပြောင်းလဲရန်ညင်ညင်သာသာအားပေးပါ။ သင်၏နည်းပညာအဖွဲ့ကိုမပါ ၀ င်ဘဲကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုတည်ဆောက်ပါ။
Analytics Form ကို - ပိုများသော ဦး ဆောင်မှုကိုထုတ်လုပ်ရန်သင်၏ပုံစံကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ visitors ည့်သည်များအား ဦး ဆောင်မှုသို့ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်နှင့်ပြောင်းလဲရန် drop-offs၊ မဆိုင်းမတွအချိန်၊ တည့်မတ်မှုနှုန်းနှင့်အခြားမက်ထရစ်များကိုတိုင်းတာပါ။
စူးစမ်းလေ့လာဆန်းစစ် - သင်၏ Multi- စာမျက်နှာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်လာရောက်လည်ပတ်သူများကိုခြေရာခံပါ။ ပြောင်းလဲခြင်းအခွင့်အလမ်းကိုမည်သည့်နေရာကလွဲချော်သည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
စစ်တမ်းများနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များ - သင့်ပရိသတ်ကိုစေ့စပ်ညှိနှိုင်းထားရန်နှင့်အချိန်တန်။ မက်ဆေ့ခ်ျများဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုသင်၏ site မှထွက်ခွာခြင်းကိုတားဆီးပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါတစ် ဦး Affiliate ဖြစ်၏ Freshmarketer ရဲ့ကူးပြောင်းခြင်း Optimization Suite.
Tags: ကူးပြောင်းမှုနှုန်း optimizationcroသစ်ပင်ကြီး
GetProspect: B2B အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရှာဖွေပြီး Prospect Lists များကိုစီမံပါ